Fikasana hifofo ny ain’ny filoha: azo tsaraina eto an-toerana ireo “commandos” vahiny | NewsMada
Par Taratra sur 23/07/2021
Mbola anatin’ny fanadihadiana lalina sy ny famotorana ny mpitandro filaminana, manoloana ilay “Raharaha fikasana hamono ny filoham-pirenena”. Naneho ny heviny ireo mpahay lalàna sy ny mpitsara, amin’ny fiahiahiana ireo voasaringotra amin’izany.
Anisan’izany nitondra ny heviny ny mpitsara teo aloha, sady filohan’ny Antenimierampirenena, Razanamahasoa Christine. Voaresany tamin’izany ny momba ny fifandraisan’ny firenena anakiroa amin’ny raharaha tahaka itony rehefa misy tranga. “Misy tokoa ny fiaraha-miasa ara-pitsarana eo amin’i Madagasikara sy i Frantsa. Zony ary azony atao ny maka ny terataniny hotsaraina any aminy”, hoy izy. Na izany aza anefa, nohitsiny fa tsy voatery hanaiky ny handefa azy ireo any Frantsa ny fitsarana eto amintsika. “Azontsika tsaraina eto ihany ireo vahiny ireo raha nahavita heloka teto amintsika”, araka ny nambarany.
Manefa ny saziny any amin’ny firenena nihaviany…
Tsy mifanalavitra amin’izany ny nambaran’ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana. Nohitsiny fa azo ampiharana ny lalàna misy eo amin’ilay firenena nanaovany heloka ireo vahiny nahavita izany. “Tsy voatery hanaiky ny handefasana azy any ivelany ny fitsarana malagasy. Azo alefa any amin’ny firenena nihaviany kosa anefa izy rehefa voatonona ny didim-pitsarana ka any izy ny manefa ny saziny. Tanterahina eto avokoa ny fanadihadiana sy ny famotorana ary ny fanononana ny sazy vao alefa any ivelany ilay vahiny’, hoy ihany izy.
Araka izany, andrasana ny ho tohin’ity raharaha ity, indrindra ny mety ho fihetsiky ny fanjakana Frantsay, manoloana ny olony, ahiana ho voarohirohy amin’izao fikasana hamono ny filoha izao.